लाहुरे र स्मिताको कथामा शिशिर भण्डारीले ल्याए सबैलाई रु’वाउने यस्तो गीत, (भिडियो हेर्नुस) – नेपाली सूर्य
लाहुरे र स्मिताको कथामा शिशिर भण्डारीले ल्याए सबैलाई रु’वाउने यस्तो गीत, (भिडियो हेर्नुस)
February 9, 2021 Nepali SuryaLeaveaComment on लाहुरे र स्मिताको कथामा शिशिर भण्डारीले ल्याए सबैलाई रु’वाउने यस्तो गीत, (भिडियो हेर्नुस)
तनहुँका राहुल गुरुङ र छोरीलाई छो’डेर हिडेकी उनकी श्रीमती घरवाट ह’राएको एक महिना पछि काठमाडौको होटलमा अर्का एक पुरुषसंग फे’ला परिन त्यसपछि उनको जीवनले नयाँ मोड लिएको छ । अहिले उनी प’छुतोको आँ’शु झा’रेकी छन् । उसले बे’च्न लैजान लागेको र आफु ठूलो सं’कटवाट जो’गिएको बताएकी छन् । इन्डियन लाहुरे रहेका राहुल गुरुगंले स्मीतासंग निकै सानोमा विवाह गरेका थिए ।
उनीहरुको प्रेम विवाह थियो । तर स्मीताले गरेको एउटा ग’ल्तीका कारण यति राम्रो जोडी भ’ताभुं’ग भयो । स्मीतालाई जनकपुरका नारायण यादव भन्ने ब्यक्तिले सुरुमा मिठा कुरा गरे । स्मीतालाई विश्वासमा पारे । आफ्नो सानो छोरीलाई स्कूल लैजान भनेर घरवाट निस्केकी स्मीता अन्तत घर छो’डेर नारायणलाई भेट्न काठमाडौ गइन् । उनी ह’राएपछि स्मीताका श्रीमानले खो’जी गरे ।
एक महिना पछि उनी काठमाडौको एक होटलमा नारायणसंग फे’ला पारे । यसरी खो’जी गरेर फे’ला नपा’रेको भए आफु यो संसारमै रहन्थीन होला उनले भनिन् । राहुलको श्रीमती जनकपुर घर बताउने नारायण यादवसंग काठमाडौमा भेटिएकी हुन् । नारायणसंग एक सामाजिक स’ञ्जाल मार्फत कुराकानी भएको बताइन् ।
उनले नारायणले आफुलाई निकै सम्मान दिएर बोल्ने भएकाले उसको ब्यवहारवाट प्रभावित भएर उसको प्रेम जा’लमा परेको बताइन् । यसैबिच कलाकार तथा सँचारकर्मी शिशिर भण्डारीले राहुल र स्मिताको जीवन कथासँग मेल खाने गीत बजारमा ल्याएका छन् । सत्यराम राम बोलको गीतमा डि’भोर्स गर्न हिडेंका दम्पतिको कथा छ । भिडियो हेर्नुस
गरिबी सहन नसकेर एकै परिवारका ३ जनाले सुनकोसीमा हाम फाले !
जब सिडियो न्यानो कपडा लिएर वृद्धाश्रम पुगिन्….
February 13, 2021 Nepali Surya
कानून बनाउने ठाउँमा गलत मान्छे छन्, अपराधको संरक्षक राजनीतिक दल नै हुन् : सुनिल पोखरेल (भिडियो)
September 30, 2020 Nepali Surya
May 18, 2021 Nepali Surya